ကချစ်စစ်ပွဲနဲ့ ပွင့်လင်းစ မီဒီယာ | ဧရာဝတီ
ထက်အောင်ကျော်| February 1, 2013 | Hits:21,676
| | တိုက်ပွဲကြားက ကေအိုင်အေ စစ်သားများကို ဧရာဝတီ ဓာတ်ပုံဆရာက မှတ်တမ်းယူထားနိုင်ခဲ့တယ် (ဓာတ်ပုံ – Steve Tickner)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်နေပြီဖြစ်ပေမယ့် စစ်မြေပြင်အခြေနေကို လွတ်လပ်စွာသတင်းပို့ခွင့်ရတာကတော့ ရက် ၆၀ မပြည့်သေးဘူးလို့ ပြောရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် အခုဖြစ်နေတဲ့ ကချင်စစ်ပွဲဟာ အစိုးရသစ်၊ လွှတ်တော်သစ်လက်ထက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလ၊ အတိအကျ ပြောရမယ်ဆိုရင် ပြန်ကြားဝန်ကြီးအသစ်နဲ့ ဒုဝန်ကြီးအသစ်လက်ထက် မီဒီယာအသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလလို့ ကြွေးကြော်နေချိန်မှာ ပထမဆုံးကြုံလိုက်ရတဲ့ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် စမ်းသပ်မှု တခုဖြစ်ပါ တယ်။
ဖဆပလ ခေတ်နဲ့ မဆလ ခေတ်အစောပိုင်းတွေမှာ သတင်းစာဆရာတွေကိုဖိတ်ပြီး စစ်မြေပြင်ကို ပြသတာတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်လို့ သိရပေမယ့် သူပုန်တွေဘက်အထိသွားပြီး သူပုန်တပ်တွေနဲ့အတူ ပြည်တွင်းသတင်းထောက်တွေ ကိုယ်တိုင် သတင်းသွားယူတာကတော့ အခု ကချင်စစ်ပွဲဟာ ပထမဆုံးလို့ ကျနော်ထင် ပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် ၈ လေးလုံးအရေးတော်ပုံဖြိုခွဲခံရပြီးနောက်ပိုင်း တောခိုခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ နယ်စပ်တကျောက စစ်မြေပြင်တွေ၊ တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းကို နိုင်ငံတကာသတင်းလောကက ဟိုးလေးတကျော် ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်တွေဟာ တောခိုကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ လနဲ့ချီနေထိုင်၊ ရှေ့တန်း စစ်မြေပြင်အထိ လိုက်ပြီး သတင်းပို့ကြတာ ကျနော်ကိုယ်တိုင် တွေ့ဖူးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်တွင်းသတင်းထောက် တဦးတယောက်မှ နယ်စပ်က ကျောင်း သားတွေရှိရာဆီ လာပြီး သတင်းယူတာ တခါမှ မတွေ့ခဲ့ရဖူးပါ။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ စစ်ပွဲထဲအထိ သတင်း ယူခွင့်ရနေပြီဆိုတာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ နဲ့စာရင် လုံးဝ တိုးတက်မှုတခုအဖြစ် မြင်မိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သတင်းသမား ဘယ်နှစ်ယောက် စစ်မြေပြင်အထိသွားပြီး သတင်းယူခွင့်ရသလဲ။ ယူရဲသလဲ။ ဒီလို သတင်းယူဖို့ အစိုးရဆီက ခွင့်ပြုချက် တောင်းရသေးလား။ အရင်က ရှိခဲ့ပြီး အခုချိန်ထိလည်း တရားဝင် မဖျက်သိမ်းရသေးတဲ့ ပုဒ်မ ၁၇-၁ တရားမ၀င် အသင်းအဖွဲ့များနဲ့ ဆက်သွယ်မှုနဲ့ မငြိဘူးလား စသဖြင့် မီဒီယာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။
တခါ အစိုးတပ်တွေဘက်ကကော သူတို့တပ်တွေနဲ့အတူ သတင်းယူဖို့ ဘာကြောင့် သတင်းထောက်တွေကို ခွင့်မပြုတာလဲ။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အကြောင်းေ ပြောနေပေမယ့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသေး။ သတင်းယူခွင့် မရှိသေးတဲ့ သဘောလား။
မေးခွန်းတွေများစွာ ရှိနေသေးပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေနေ အရင်ကထက် တစုံတရာ တိုးတက်လာတာ သေချာတယ်လို့ ပြင်သစ်အခြေစိုက် နယ်ခြားမဲ့ သတင်းသမား ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ RSF က ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ အမြဲတန်း အောက်ဆုံးရောက်နေလေ့ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဟာ အခုနှစ်မှာတော့ အရင်ကထက် ၁၈ ဆင့်အထိ တိုးတက်လာပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၉ မှာ ၁၅၁ နေရာကို ရောက်လာတယ်လို့ RSF ကပြောပါတယ်။
စစ်အစိုးရခေတ်က ဖမ်းဆီးထားတဲ့ သတင်းထောက်နဲ့ ဘလော့ဂါတွေကို လွတ်ပေးလိုက်တာ၊ စာပေစိစစ်ရေးဌာနကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တာ၊ ပြည်ပသတင်းဌာနတွေကို ပြည်ဝင်ခွင့်ပေးတာတွေဟာ သိသာတဲ့ တိုးတက်မှုတွေလို့ RSF က ထောက်ပြထားပါတယ်။ ဒါက နိုင်ငံတကာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အဖွဲ့အစည်းတခုကနေ မြန်မာ့မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်အပေါ် အမြင်ပါ။
နေ့စဉ်သတင်း ဖတ်နေသူ၊ မီဒီယာ တိုးတက်မှုအကြောင်း လေ့လာနေသူတဦးရဲ့အမြင်ကို ထပ်ဖြည့်ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲဒီ ၃ ချက်အပြင် မီဒီယာတွေအပေါ် ဆက်ဆံပြောဆိုမှု၊ မီဒီယာရဲ့ အရေးပါပုံအကြောင်း အစိုးရက နားလည်လာမှု၊ မီဒီယာတွေမေးသမျှကို တာဝန်ခံဖြေကြားပေးမှု၊ အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းထုတ်ပြန်မှု၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခေတ်အစားဆုံး ဆိုရှယ်မီဒီယာ Facebook ပေါ် အထိ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင်တက်ပြီး လူထုဆက်သွယ်ရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်လာမှု တွေဟာ ဒီနေ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ ဒုဝန်ကြီးတွေလက်ထက် ထူးခြားတဲ့ တိုးတက်မှုအဖြစ် မြင်မိပါတယ်။
ဒီလို တိုးတက်လာတာဟာ အစိုးရဖက်က ပြောင်းလဲချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိတာအပြင် တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာ တွေနဲ့လည်း ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် နေပြည်တော်က ပြန်ကြားရေး ဒု ၀န်ကြီးနဲ့ Facebook ပေါ်မှာ အပြန်အလှန် ရေးသားဆွေးနွေးနိုင်သလို လိုင်ဇာမှာ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ABSDF-NB ကျောင်းသားတပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း)က ရဲဘော်တွေနဲ့လည်း တပြိုင်တည်း ချက်တင်လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေအထိ ဆက်သွယ်ရေးနည်း စနစ်က တိုးတက်လာနေပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သတင်းတွေဟာ အလျှင်အမြန် စီးဆင်းနေပြီး တချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းမထုတ်ပြန်ဘူးဆိုရင် မထုတ်ပြန်တဲ့ဘက်က နစ်နာသွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေဆီ တွန်းပို့လာနေပါတယ်။
အချိန်နဲ့တပြေးညီ တာဝန်ခံဖြေရှင်းမှုတွေထဲက ဥပမာတခုကိုကောက်နှုတ်ပြရမယ်ဆိုရင် ကေအိုင်အေ တပ်တွေကပစ်လို့ အရပ်သားတွေသေပါတယ်ဆိုပြီး အစိုးပိုင် သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံဟာ မှားယွင်းနေပြီး တကယ်က အဲဒီပုံဟာ အဲပုဂံလေယာဉ် ပျက်ကျစဉ်ကပုံဖြစ်ပါတယ်လို့ အစိုးရ သတင်းနဲ့ စာနယ်ဇင်းဌာနရဲ့ တောင်းပန်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
တခါ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်း ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သဘောထားကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါဝင်တဲ့ အချက်အလက်နဲ့ ရေးသားတင်ပြပုံတွေဟာ လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာခေတ်နဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျမဖြစ်သေးပေမယ့် စစ်အစိုးရ ခေတ်လို ဗြောင်မငြင်းဘဲ ဒီလို ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလာတာကိုက တိုးတက်မှုအဖြစ် မြင်သင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
Mindset နဲ့ ဥပဒေတွေ ပြောင်းဖို့လို
RSF အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံချက်တွေ၊ ရန်ကုန်မီဒီယာလောကနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာလောကမှာ တွေ့နေရတာတွပေါ်မူတည်ပြီး လက်ရှိပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဒီလိုချီးမွန်းခန်းဖွင့်နေတုန်း ”လေလှိုင်းထဲက ကချစ်စစ်ပွဲ” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ် ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မြင်လိုက်ရပါတယ်။ အသေချာ ဖတ်ကြည့်တော့ ”ဟာ ဒီလူတွေကလဲ အရင် လူတွေအတိုင်းပါပဲလား” ဆိုပြီး အသံထွက် ညည်းမိတဲ့အထိ စိတ်ပျက်သွားမိပါတယ်။
ကေအိုင်အိုက တာဝန်ယူထုတ်လွှင့်နေတဲ့ လိုင်ဇာ FM ကို တိုက်ဖျက်တဲ့အစီအစဉ် (စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးဌာနကလို့ ယူဆရ) အရ သဇင် FM ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကို စစ်တပ်က ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ စက် အားကောင်းလှတဲ့ မြ၀တီနဲ့ စစ်တပ်ပိုင် စက်ကြီးတွေနဲ့ လိုင်ဇာ FM လိုင်း Frequency တထပ်တည်းမှာ သဇင် FM ကို ထုတ်လွင့်နေတာဖြစ်တယ်၊ ကေအိုင်အေ မကောင်းကြောင်း ၀ါဒဖြန့်မှုကို အဓိက လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ သိလိုက်ရပါတယ်။
ဒီလုပ်ရပ်ကိုမြင်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ၀န်းကျင်၊ DVB ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံနဲ့ RFA လွတ်လပ် သောအာရှအသံ လိုင်းတိုရေဒီယိုလိုင်းတွေပေါ်စက အဲဒီမြ၀တီပိုင်စက်ကြီးတွေနဲ့ လိုင်းဖျက်ခဲ့ဖူးတာကို သွားသတိရမိပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးကျော်ဆန်း မကြခဏ ပြောလေ့ရှိတဲ့ ”မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့တိုက်ရမယ်” ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံကို ပြန်ကြားယောင်နေမိပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို အသေအချာပြန်ဖတ် ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း လေသံက သိပ်ပြောင်းလှတယ်ရယ်လို့ မဟုတ်သေးပါဘူး။
ဆိုလိုတာကတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး၊ လူထုရဲ့နိုင်ငံရေးနိုးကြားမှု၊ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေအရ သဘောထားတွေ ပြောင်းဖို့လိုနေပြီဆိုတာကို သိပေမယ့် နှစ် ၆၀ နီးပါး အရိုးစွဲလာခဲ့တဲ့၊ ခေါက်ရိုးကျိုးနေသူတို့ရဲ့ စဉ်းစားပုံကတော့ အရင်လိုပါပဲ။
ဒါကြောင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအပြင် စဉ်းစားပုံတွေပါ ပြောင်းဖို့ လိုနေပါတယ်။ စစ်ယူနီဖောင်းကနေ အရပ်သားဝတ်စုံ ပြောင်းဝတ်တာအပြင် စစ်သားဘ၀က စဉ်းစားပုံနေရာမှာ အရပ်သားတဦးရဲ့ စဉ်းစားပုံနဲ့ပါ ပြောင်းပြီး အစားထိုးဖို့ လိုနေပါတယ်။
မီဒီယာအပေါ်တင်းကျပ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ဖျက်သိမ်းတာအပြင် မီဒီယာအပေါ် လွတ်လပ်ခွင့်ပေးမယ့် ဥပဒေတွေကိုပါ ပြဌာန်းပေးဖို့ လိုနေပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ သတင်းယူခွင့်နဲ့ သတင်းယူခွင့်အပေါ် နှောင့်ယှက်ဟန့်တားသူတွေကို အရေးယူနိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေပါ ပြဌာန်းပေးဖို့ လိုနေပါတယ်။ ဖမ်းဆီးထားသူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးတာအပြင် နောက်ထပ် မဖမ်းတော့ပါဘူးဆိုိတဲ့ အာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေ လိုနေပါတယ်။
ဒီအတွက် မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) ကလည်း သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကာကွယ်မယ့် ဥပဒေ မူကြမ်းကို အခိုင်အမာ တင်ပြဖို့ လိုပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ သတင်းယူခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ သတင်းမေးခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ သတင်းရေးခွင့် အားလုံးကို အပြည့်အ၀ပေးဖို့။ အခြေနေအရ ၀န်ကြီးတဦး၊ အာဏာပိုင် တ ဦးရဲ့ ခွင့်ပြုချက်အရမျိုး မဟုတ်ဘဲ တိကျတဲ့ ဥပဒေအရ မီဒီယာလွပ်လပ်ခွင့်ပေးဖို့ လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
နေပြည်တော် ဒေးလီးခေတ် မဟုတ်တော့သတင်းသမားများ ဖမ်းဆီးထောင်ချမှု အာဏာရှင်ဆန်ဟု အမေရိကန် ဝေဖန်စာနယ်ဇင်း ဖိနှိပ်မှု ဘာကြောင့်လုပ်သလဲဆန္ဒပြ သတင်းသမားများကို ဂျာနယ်တိုက်လိုက်၍ စိစစ်တရားစွဲမည်မီဒီယာ ဖိနှိပ်မှု တကျော့ပြန်လာပြီ
pps၁၂၃၄၅ February 1, 2013 - 8:51 pm ကြိုက်တာရေး လို့ရတယ်။
ဦးသိန်းစိန် နှင့် စစ်တပ် မကောင်းကြောင်းက လွဲရင် အားလုံးကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်။
စစ်တပ် က မြန်မာပြည် ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကြီး ဆိုတာ ပြည်သူတွေ ယုံသွားအောင် သတင်းသမားတွေ ရေးကြပါ။
Reply lမောင်မြန်မာ February 5, 2013 - 4:12 pm please, irra, ဗကပ အနီလား အဖြူလား pps1 to 5
Reply AunG February 1, 2013 - 10:32 pm Good Writing, All Truth, carry on…,we all Truth loved Burma People always support you…
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ February 2, 2013 - 3:18 am စစ်ပွဲတွေမှာ သတင်းလိုက်ယူတဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်းထောက်တွေဟာ အတွေ့အကြုံရှိပြီး သတင်းဌာနရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ လိုက်ယူတာပါ။ သူတို့အတွက် ဆေးကုဘို့ ကျမ်းမာရေး အာမခံနဲ့ အသက်အာမခံကိုလဲ ပြည့်ပြည့်၀၀ ၀ယ်ယူထားပြီး ဒဏ်ရာ အနာတရ ရခဲ့ရင် အပြည့်အ၀ဆေးကုခွင့်၊ မသန်မစွမ်းဖြစ်သွားရင် ထောက်ပန့်ကြေး၊ အသက်သေဆုံးခဲ့ရင် ကျန်ရစ်သူမိသားစုအတွက်လျောကြေးခံစားခွင့်တွေ အပြည့်အ၀ ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ပြည်တွင်းက ၀ါသနာအရ၊ ၀မ်းရေးအရ လုပ်စားနေရသူ သတင်းထောက်တွေမှာတော့ အဲသလို အတွေ့အကြုံတွေ၊ ခံစားခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်တွေ ရှိမယ် မထင်ဘူး။ စစ်မြေပြင်မှာ သတင်းယူရတာ အလွန် အန္တရာယ် ကြီးပါတယ်။ တဘက်က သတင်းထောက်မို့ တမင်ပစ်တာ မဟုတ်ပဲနဲ့၊ ဘယ်သူမှန်း ဘာမှန်းမသိ ပစ်လိုက်တာထိခိုက် နာသေကြမှာ စိုးရိမ်ပါတယ်။ သတိရှိကြစေချင်သလို ဘေးကင်းကြပါစေ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Reply Mr Aim February 2, 2013 - 11:39 am စစ်တိုက်ဖူးသူတိုင်း စစ်မတိုက်လိုကြပါ။
စစ်တိုက်ဖူးပြီး ဒဏ်ရာရ ကျဆုံးရဲဘော်ဟောင်း များ၏ ဇနီးများ နှင့် သားသမီးများ JJ ကလပ် နှင့် သိမ်ကြီးဈေးတွင် လှည့်လည် လုပ်စားနေရပါသည်။
စစ်မတိုက်ဖူးသော ရာထူကြီး စစ်ဗိုလ်များ ထိုကဲ့သို့သော နေရာများတွင် လှည့်လည် ပိုက်ဆံဖြုန်းတီးနေသည် ကို နှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံးတွေ့ခဲ့ရပါသည်။
ဘယ်သူ မပြုမိမိ ပြုဆိုသော်လည်း တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲကျအောင် လုပ်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ထို အကျိုးဆက် ဖြစ်ပေါ်လာအောင် တိုက်ရိုက် အမိန့်ပေးခြင်း၊ လျှိ့ဝှက် အမိန့်ပေးခြင်းဖြင့် တာဝန်ရှိကြကြောင်း အသိပေးလိုပါသည်။
စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များ၏ ကိုယ်ကျိုးကို ပဓာန ထားသော လက်နက်ဖြင့် အုပ်ချုပ်မှု ပုံကြောင့် တိုင်းပြည် နစ်နာခဲံရသကဲ့သို့ စစ်ဖြစ်ပွားခြင်း တိုင်းရင်းသားများ ကို အစဉ်တစိုက် ဖိနှိပ်ခြင်းများကြောင့် တိုင်းပြည် များစွာနစ်နာခဲ့ရသည်။
Reply Ven. Pandita February 2, 2013 - 2:13 pm အစိုးရဖက်က သူတို့တပ်တွေနဲ့အတူ သတင်းယူဖို့ ဘာလို့ခွင့်မပြုတာလဲဆိုတာကတော့ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ သတင်းသမားတွေ စစ်မြေပြင်လိုက်ပြီးသတင်းယူတဲ့ကိစ္စအတွက် မီဒီယာ ဥပဒေစည်းမျဉ်းတွေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိသေးသလို အစိုးရတပ်ထဲမှာလဲ မီဒီယာနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စ၊ ပူးတွဲဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအတွက် လေ့ကျင့်ထားတာ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း (protocol) တွေထုတ်ပြန်ထားတာ ရှိပုံမရသေးဘူး။ ဒါတွေရှိလာမှ ခွင့်ပြုနိုင်မှာပေါ့။
တခုရှိတာက “အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းထုတ်ပြန်မှု” ကိုတော့ အမေရိကန်စစ်တပ်တောင် ခွင့်မပြုပါဘူး။ သတင်းထောက်တွေကို စစ်မြေပြင်ခေါ်သွားပေမယ့် လက်ကိုင်ဖုန်းကအစ သိမ်းထားပြီး စစ်တပ် ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးစက်တွေကိုသာ အသုံးပြုခွင့် ရကြ ပါတယ်။ ပြန်ပို့တဲ့ သတင်းကို ဆင်ဆာဖြတ်ပါတယ်၊ အင်မတန် sensitive ဖြစ်တဲ့သတင်း မျိုးကို လုံးဝပြန်ပို့ခွင့် မပြုပါဘူး။ အဲ . . . ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ရောက်ရင်တော့ ကြိုက်တာ　ရေးပေါ့၊အနှောင့်အယှက်　အတားအဆီး　မရှိပါဘူး။
လိုင်ဇာ FM နဲ့　သဇင် FM တို့ကိစ္စကတော့　၀ါဒဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲ　(propaganda war)　သာဖြစ်ပါတယ်။　အဲဒီနှစ်ခုလုံးကို　လွတ်လပ်မျှတတဲ့　သတင်းမီဒီယာ　စာရင်းထဲ　ထည့်ပြီး　စဉ်းစားနေစရာ　လိုမယ်မထင်ပါ။
Reply Mr Kian February 2, 2013 - 6:55 pm Ven.Pandita – Why KIO/KIA allowed all media because they are Open Society and pro-Democracy Peoples, especially they loved Freedom and [KIO/KIA]they fight for Peaceful and Development Country to United States of Burma Federation…
Reply ပါကြီးဖိုး February 2, 2013 - 10:44 pm အမှန်ကို ဝန်ခံရရင် ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအချင်းချင်း သတ်ကြတဲ့ စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ် ကချင်စစ်ပွဲသတင်းကို ဖတ်ချင်စိတ်မရှိပါ။ ဒါကြောင့် စစ်မြေပြင်သတင်းယူခွင့်ရှိမရှိကို စိတ်မဝင်စားမိပါ။ စစ်ပွဲလုံးဝရပ်စဲသွားခြင်းကိုသာ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
Reply ငြိမ်းချမ်းမောင် February 4, 2013 - 1:37 pm မှန်တယ်ဗျို့ ကိုပါကြီးဖိုးရေ…စစ် ဆိုတာ နောက်နောင် လုံးဝ မရှိတော့ရင် အဲဒီ့်ကိစ္စတွေ ဘာမှ လိုတော့မှာ မဟုတ်ဘူး..ဒီတော့ စစ်ပွဲကြီးပြီးဆုံးဖို့ (လုံးဝ) အစွမ်းရှိသလောက် တတ်နိုင်တဲ့ နေရာကနေ ပါဝင်ကြတာပေါ့ဗျာ…လောလောဆယ် ဆုတောင်းတာပဲ တတ်နိုင်တတ်နိုင်ပေါ့..
ငွေကြာယံ ကျောင်းတိုက် အစီးခံရတဲ့ည
ထိုင်းနိုင်ငံမှ မူးယစ်ကျေးကျွန် မြန်မာလှေသမားတို့ ဘ၀
မိုင်းလားက တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဈေးကွက်
သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ် (၂)
ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ မတော်တဆ တီထွင်မှုများ
ကြိုးတိုက် ဋီကာ (နိဂုံး)
ကြိုးတိုက် ဋီကာ အပိုင်း (၁၇)